हेर्नुहोस् कुन थियो पहिलो पानीबाट प्रभावित नहुने फोन ? - सिम्रिक खबर
अब मोबाइलमा गलत सन्देश प्रवाह गरेमा प्राधिकरणले कारबाही गर्ने रबीनाले सलमानमाथि लगाइन् यस्तो आरोप आजको मौसम पुर्वानुमान संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनमा युद्धरत दुवै पक्षलाई युद्धविराम गर्न आग्रह दशैँको आज छैठौं दिन कात्यायनी भगवतीको पूजा गरी मनाईदै विश्वभर पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ३ लाख ३४ हजार २१३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
हेर्नुहोस् कुन थियो पहिलो पानीबाट प्रभावित नहुने फोन ?
तपाईंले प्रयोग गर्ने फोन वाटर रेसिस्टेन्ट छ कि छैन ? अधिकांश फोनहरु अहिले पनि पानीमा भिज्दा बिग्रिने गर्छन् । तर वाटर रेसिस्टेन्स फोन दश वर्ष अघि २०१० मा नै बनिसकेको थियो । पानीबाट प्रभावित नहुने मोटोरोला डिफाई फोन मोटोरोला कम्पनीले बनाएको थियो । मोटोरोला डिफाई त्यस बेलाको फोन हो, जतिखेर फोन निर्माणकर्ता कम्पनीहरुले कुनै ट्रेण्ड फलो गर्ने भन्दा पनि अत्यन्तै आवश्यकता फिचरहरु राख्ने गर्दथे । मोटोरोला डिफाई फोन अहिलेको प्रिमियम मोडल फोन जस्तो थिएन । तर यो फोनले दैनिकी अवरोधहरुलाई भने राम्रोसँग प्रतिरक्षा गर्न सक्दथ्यो ।
यो फोनको लुक्सको कुरा गर्दा यसमा ८५४ बाई ४८० पिक्सेलको ३।७ इन्चको टीएफटी डिस्प्ले थियो । यसको लम्बाई १०७ एमएम र मोटाइ १३ एमएम रहेको थियो । यसको डिस्प्लेमा पनि गोरिल्ला ग्लास कोटिङ रहेको थियो । जसले फोनलाई स्क्रयाचबाट जोगाउने गर्छ । पर्फमेन्सको कुरा गर्दा मोटोरोला डिफाई आफ्नो समयको योग्य फोन थियो । यसमा ५१२ एमबीको र्याम र ओएमएपी चिपसेट रहेको थियो । यसमा गुगलको बुर्जुवा एन्ड्रोइड २।१ अपरेटिङ सिस्टम थियो । यो फोन अहिलेको जस्तो फास्ट त थिएन । तर त्यसबेला युट्युक क्लिप हेर्न र गूगल म्याप हेर्न, वेब ब्राउज गर्नका लागि सजिलै थियो । यो फोनको ट्रम्प कार्ड भनेको यसको आईपी ६७ रेटिङ हो । यसको अर्थ यो फोनलाई एक मिटर पानीभित्र आधा घण्टासम्म डुबाएर राख्दा समेत कुनै असर पर्दैन । यो रेटिङ प्राप्त गर्न फोनमा केही आश्चर्यजनक व्यवहारिक समाधानका उपायहरु प्रयोग गरिएको थियो । फोनको बडी प्लास्टिकको थियो भने यसको यूएसबी पोर्ट र हेडफोन ज्याकलाई रबर प्लग सहित सिल गरिएको थियो । तर यदि फोनको ज्याकमा प्लग फिट भएन भने यसले फोनलाई पानीबाट बचाउन सक्दैनथ्यो । यसकारण यो फुल वाटरप्रुफ भने थिएन ।
फोनको सिम स्लट, एसडी कार्ड स्लट र रिमूभेबल ब्याट्रीलाई भने ब्याकप्लेटले सुरक्षित तरिकाले सिल गरेर राखेको थियो । यसमा मोइस्चर र धुलो पनि राम्रोसँग छिर्न सक्दैन थ्यो । यो फोन साधारण थियो । तर त्यसबेलाका अन्य एन्ड्रोइड डिभाइसले गर्न नसक्ने काम यो फोनले गरेको थियो । यो एउटा रग फोन थियो । बजारमा यो फोन आइसकेपछि अन्य एन्ड्रोइड फोन म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरुले आफ्नै किसिमका विशेषता सहितका फोनहरु निर्माण गरेका थिए । सन् २०११ मा सोनी एरिक्सनले एक्सपेरिया एक्टिभ फोन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसै बेला सामसङले पनि एक्स कभर सिरिज सार्वजनिक गरेको थियो । तर अन्य कम्पनीलाई मोटोरोलाको जस्तै वाटर रेसिस्टेन्ट फोन ल्याउन भने केही समय लाग्यो । सोनीले एक्सपेरिया जेड सन् २०१३ मा ल्यायो भने सामसङले ग्यालेक्सी एस फाइभ सन् २०१५ मा ल्यायो ।
यस्तै एप्पल र गूगलले पनि क्रमशः आइफोन सेभेन र पिक्सल टुमा क्रमशः २०१६ र २०१७ मा आईपी ६७ रेटिङ पाए । पछिल्लो समय वाटरप्रुफ फोनमा पहिले जस्तो रबर प्लग प्रविधि प्रयोग हुँदैन । अहिले यो प्रविधि निकै नै अत्याधुनिक बन्दै गइरहेको छ । अहिले फोनमा प्रयोग हुने आधुनिक ग्लासमा कम्पनीहरुले एडिसियस, इन्टरनल ग्रोमेट्स र कोटिङ प्रयोग गर्छन् । जसले पुरानो कमजोर प्रविधिलाई विस्थापन गरिसकेको छ । आजभोलिका सबै जसो फ्ल्यागशिप फोनहरु वाटरप्रुफ हुने गर्दछन् । तर स्मार्टफोनहरुमा भइरहेको नयाँ डिजाइन प्रयोगसँगै वाटरप्रुफ प्रविधि फोनमा ल्याउन कम्पनीहरुका लागि एउटा चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ । मल्टिपल स्क्रिन, फोल्डिङ बडी र क्रेजी ट्वीस्ट डिजाइन भएका नयाँ फोनहरुको हिङ्ग र फोल्डमा धुलो तथा पानी छिर्न नदिनु कम्पनीहरुका लागि अर्को चुनौती बनेको छ ।